Tababare Solskjær oo ka hadlay dhaawacyada Pogba iyo De Gea… (Miyey diyaar u yihii kulanka soo aadan ee Premier League?) – Gool FM
(Manchester ) 23 Okt 2019. Macalinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa xaqiijiyay haddii ay David de Gea iyo Paul Pogba kulanka Norwich City ee horyaalka Premier League.
Haddaba macalin Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu sheegay in Paul Pogba uusan diyaar u aheyn kulanka ay Manchester United u safreyso Axada Norwich City.
Xiddiga reer France ee Pogba ayaa dhaawac canqowga ah ku seegay 6 ka mid 8-dii kulan ugu dambeeyay, isagoo aan ka mid aheyn xiddiga Manchester United ee u safray dalka Serbia si ay u soo ciyaaraan kulan ka tirsan kulankooda saddexaad ee heerka group-yada UEFA Europa League, waxayna wajahayaan naadiga Partizan Belgrade.
Dhinaca kale goolhaaye reer Spain ee David de Gea ayaa sidoo kale seegay safarkii xiddigaha kooxda ay ku aadayeen Serbia, kaddib markii uu ka soo kabsaday xanuun dhanka muruqa ah isla markii uu ku soo bilaawday kulankii ay barbaraha la galeen Livepool ee horaanta toddobaadkan.
Yeelkeedee, tababare Solskjær ayaa wuxuu sheegay in David de Gea uu diyaar u yahay kulanka Axada ee horyaalka Premier League ay kula ciyaarayaan kooda Norwich City.
“David wuxuu diyaar u yahay kulanka Axada laakiin ma dooneynin inaan halis ku galino safarkaan isaga, balse Paul maya” Ole Gunnar Solskjær ayaa sidaas yiri.